अक्षयसंग गहिरो प्रेममा थिईन् शिल्पा, यसकारण टुटेको थियो सम्बन्ध - samayapost.com
सोमबार, ३१ जेठ २०७८
अक्षयसंग गहिरो प्रेममा थिईन् शिल्पा, यसकारण टुटेको थियो सम्बन्ध
समयपोष्ट २०७८ जेठ २६ गते २०:३६
कुनै समय बलिउडकी चर्चित नायिका शिल्पा सेट्टी नायक अक्षय कुमारसँग गहिरो प्रेम सम्बन्धमा थिईन् । मिडिया रिपोर्टका अनुसार अक्षयले शिल्पासँग एक मन्दिरमा विवाह समेत गरेका थिए । तर,जब उनको जीवनमा नायिका ट्विंकल खन्नाको प्रवेश भयो, यसपछि उनले शिल्पासँगको सम्बन्धलाई विश्राम लगाएल गाएको बताईन्छ ।
‘फिल्मफेयर म्यागेजिन’का लागि एकसाथ फोटोसुट गरेपछि अक्षय र ट्विंकल नजिक भएका थिए । चलचित्र ‘मे खिलाडी तु अनाडी र इन्साफ’ लगायतका चलचित्रमा एकसाथ देखिएका शिल्पा र अक्षयले सन् २००० मा रिलिज भएको चलचित्र ‘धड्कन’मा अन्तिम पटक एकसाथ काम गरेका थिए । अक्षयले आफूलाई धोका दिएको थाहा पाएपछि शिल्पाले उनीसँगको सम्बन्ध तोडेकी थिइन् ।
अक्षयको बिषयमा कुरा गर्दै शिल्पाले एक अन्तरवार्तामा भनेकी छिन्–‘मैले कहिले पनि सोचेको थिइनँ कि अक्षयले मेरो साथमा यस्तो गर्नेछन् । म ट्विंकललाई यो कुरामा दोषी मान्दिनँ । जब मेरो पार्टनरले नै मलाई धोका दिएका छन् भने अरुसँग म किन गुनासो गर्नु ?’
शिल्पाले अक्षय कुमारले आफूलाई प्रयोग गरेको आरोप समेत लगाएकी थिइन् । उनले, अरु कोही पाएपछि आफूलाई अक्षयले किनारा लगाएको पनि आरोप लगाएकी थिइन् । शिल्पाले भनेकी छिन्–‘म खुशी यसकारण छु कि मैले आफूलाई यो घटनाबाट बाहिर निकाल्न सकेँ । म अक्षयलाई कहिले पनि माफी दिन्नँ र उनीसँग कहिले पनि काम गर्दिनँ ।’
शिल्पाले अक्षयमाथि आरोप लगाउँदै यूवतीको भरोसा जित्नका लागि उनीहरुसँग बिहेको नाटक रच्ने गरेको पनि बताएकी छिन् । अक्षयले सन् २००१ म ट्विंकलसँग बिहे गरेका थिए । शिल्पाले भने सन् २००९ मा भारतका सफल व्यापारी राज कुन्द्रासँग बिहे गरेकी थिइन् । मोडलिङबाट आफ्नो करिअर सुरु गरेकी शिल्पाले सन् १९९२ मा चलचित्र ‘गाता रहे मेरा दिल’मा काम गरेर बलिउडमा डेब्यू गरेकी थिइन् । तर, यो चलचित्र रिलिज हुन सकेन ।
यसपछि, शिल्पाले नायक साहरुख खानसँग चलचित्र ‘बाजीगर’मा काम गरिन् । यो चलचित्र सुपरहिट भयो । यसपछि, शिल्पाको करिअर पनि चम्किन थालेको थियो ।
पहिलेकै अवस्थामा फर्केलिन् त मोडल निशा ? यसो भन्छन् नर्भिकका चिकित्सक
धरहरामा काटे राजेश हमालले जन्मदिनको केक
बुबा जितेन्द्रको एक सर्तका कारण एकताले गरिनन् विवाह
रिया चक्रवर्ती बनिन् २०२० की सबैभन्दा मनमोहक महिला
यी मोडल जो दुरुस्तै शाहरुख खानजस्तै देखिन्छन्
श्रीमतीले थुकेपछि मिडियामा करण, पक्राउ पर्नुअघि यी दुई बिच के-के भयो ?
उच्च रक्तस्रावका कारण सुत्केरीको मृत्यु
पर्यटन क्षेत्रमा कोरोनाको प्रभाव : लुम्बिनी प्रदेशका मात्र ११ हजार होटल व्यवसायी सङ्कटमा
विष्णु पौडेल पुगे वामदेव निवास, चार घण्टा छलफल
एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन
कोरोना नियन्त्रणमा ध्यान दिन आग्रह
यसपालिको मनसुन जोखिमपूर्ण : १८ लाख मानिस प्रभावित हुने अनुमान
राउटे युवतीको भिडियो हटाउन अदालतको आदेश, पीडित युवतीलाई थाहै नदिई यसरी गरियो स्वास्थ परिक्षण
पूर्वमहालेखा परीक्षक अधिकारीको निधन
को हुन् मन्त्री पहाडी ?
मन्त्री दिपक मनाङ्गेका भाइ लागुऔषधसहित पक्राउ